Sannad kasta waxaan aaminsanahay inay wax walba bilaabayaan inay isbarbar dhigaan, laakiin sannad walba suuqa si weyn ayuu isu beddelaa - 2015-na waxba kama duwana. Kordhinta mobilka, kor u kaca xayeysiiska liis garaynta alaabada, muuqaalada noocyada xayeysiiska cusub dhammaantood waxay gacan ka geysteen isbeddello muhiim ah oo ku yimid habdhaqanka macaamiisha iyo qarashyada la xiriira ee suuqleyda. Xogtan cusub ee Kenshoo waxay muujineysaa in bulshada ay si weyn ugu korodhay suuqa. Suuqyadu waxay kordhinayaan qarashka ay ku bixinayaan bulshada 50%
Markii ugu horreysay ee aan dib-u-eegay macluumaadkan, waxaan yara yara shakiyay inay jiraan qiyaaso badan oo la waayey… laakiin qoraaga ayaa caddeeyay inay diiradda saarayeen ololayaasha suuq-geynta dijitaalka ee aysan ahayn istiraatiijiyad guud. Waxaa jira cabirro kale oo aan u kuurgalno guud ahaan, sida tirada keywords keywords iyo celcelis darajo, saamiyada bulshada iyo saamiga codka… laakiin olole sida caadiga ah wuxuu leeyahay bilow bilow ah oo la joojiyo sidaas darteed maahan in mitir kasta lagu dabaqo.